Naamani Anoteerera Musikana wechiIsraeri | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mukuru Wemasoja Nemusikana Mudiki
Kunyika yeSiriya kwaiva nemumwe musikana mudiki wechiIsraeri uye ikoko kwaiva kure chaizvo nekumba kwavo. Musikana wacho akanga abiwa kubva kumhuri yavo nemasoja eSiriya, uye akanga ava muranda wemudzimai wemumwe mukuru wemasoja ainzi Naamani. Musikana wacho ainamata Jehovha kunyange zvazvo vanhu vaiva ikoko vaisanamata Jehovha.
Naamani akarwara nechirwere chemaperembudzi uye aigara achirwadziwa. Musikana wacho aida chaizvo kubatsira Naamani. Akaudza mudzimai waNaamani kuti: ‘Pane munhu wandinoziva anogona kuporesa murume wenyu. KuIsraeri kune muprofita waJehovha anonzi Erisha. Anogona kurapa murume wenyu.’
Mudzimai waNaamani akaudza murume wake zvakanga zvataurwa nemusikana wacho. Naamani aida kuita chero chii zvacho chaigona kumuporesa, saka akaenda kumba kwaErisha kuIsraeri. Naamani aitarisira kuti Erisha aizomugamuchira semunhu anoremekedzwa. Asi Erisha haana kutombotaura naye asi akatuma mushandi wake kuti anokwazisa Naamani uye kuti amuudze kuti: ‘Enda unogeza ka7 muRwizi rwaJodhani. Uchabva wapora.’
Naamani haana kufara nazvo. Akati: ‘Ndanga ndichifunga kuti muprofita uyu achandirapa achiita zvekushevedzera kuna Mwari wake achiisa maoko ake pandiri. Pane kudaro, anditi ndiende kurwizi urwu rwuri kuIsraeri. Tine nzizi dzitori nani kuSiriya. Ko ndikangoenda hangu ikoko?’ Naamani akatsamwa ndokubva pamba paErisha.
Vashandi vaNaamani vakamubatsira kuti agadzirise mafungiro ake. Vakati kwaari: ‘Kana muchida kupora handiti munotoita chero zvamunenge maudzwa? Zvamanzi muite nemuprofita uyu hazvina kana kumbooma. Madii kungoita zvaataura?’ Naamani akavateerera. Akabva aenda kurwizi rwaJodhani uye akazvinyudza imomo ka7. Paakabuda mumvura kechi7, Naamani akanga apora. Akafara chaizvo, uye akadzokera kunotenda Erisha. Naamani akati: ‘Iye zvino ndava kuziva kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi.’ Unofunga kuti musikana wechiIsraeri akanzwa sei Naamani paakadzoka aporeswa?
“Makaita kuti mumiromo mevana nemevacheche mubude mashoko ekurumbidza.”​—Mateu 21:16
Mibvunzo: Unofunga kuti zvaiva nyore here kuti musikana mudiki wechiIsraeri ataure nemudzimai waNaamani? Unofunga kuti chii chakamubatsira kuti asatya?
2 Madzimambo 5:1-19; Ruka 4:27
Jehovha Achakubatsira Kuti Usatya
Ungaita sei kuti usatya kuudza vamwe nezvaJehovha?
Munhu Ane Maperembudzi Anoporeswa!
Ona kuti Naamani aifanira kuita sei kuti aporeswe maperembudzi aaiva nawo.
Chii chakaita kuti Naamani ateerere? Pasi rose, zvii zviri kuitwa nevaKristu pakuteerera Jesu?
Akanga Akaoma Musoro Asi Akazoguma Ava Kuteerera
Pane pawakamboomesa musoro here? Dzidza kuti Naamani akabatsirwa sei kuti achinje kuva munhu anoteerera.